Bvudzi Kubvisa Vagadziri & Vatengesi - TAIWAN Bvudzi Kubvisa Fekitori
Diode laser inomiririra chizvarwa chitsva chema laser kubvisa bvudzi zvishandiso, izvo zvinopa kurapwa kwekusingaperi bvudzi kuti ribudirire uye rakaringana. Smedtrum ST-805 Diode Laser System inouya nechidimbu chema wavelengths akasiyana, ichipa yakagadziriswa uye inogutsa mhedzisiro.
Diode laser inomiririra chizvarwa chitsva chemalaser bvudzi kubvisa michina, iyo inopa inoshanda zvakanyanya uye chaiyo yekusingaperi bvudzi rekubvisa kurapwa. Smedtrum ST-802 Diode Laser System inouya nehukuru hukuru hukuru hweakateedzana, zvidimbu zvemarevelengths akasiyana, zvichipa yakagadziriswa uye inogutsa mhedzisiro.
Smedtrum ST-801 Bvudzi Removal Diode Laser Sisitimu inoratidzira mune yakakwira simba density uye ipfupi kupomba upamhi, iyo yayo inoburitsa simba inowedzera kusvika 1600w. Inogonesa kushanda kwekubviswa kwebvudzi kunyanya kune rakatetepa uye rakatsvuka-bvudzi bvudzi.
Diode laser inomiririra chizvarwa chitsva chema laser kubvisa bvudzi zvishandiso, izvo zvinopa kurapwa kwekusingaperi bvudzi kuti ribudirire uye rakaringana. Smedtrum ST-800 Diode Laser Sisitimu inouya nemaoko emaoko ematanho akasiyana, ichipa yakagadziriswa uye inogutsa mhedzisiro.
ST-691 IPL Sisitimu
IPL ndiyo yega fotoelectric chishandiso chinoburitsa mwenje yemwenje dzakasiyana dzemalevelths, ayo anogona kubata akawanda matambudziko eganda mune kumwe kurapwa. Iwo mairi maviri emaoko emaoko maviri evara anopawo kurapwa kwakaringana. Smedtrum ST-691 IPL Sisitimu inogona kushandiswa pakurapa acne, maronda maronda, epidermal pigmentation kubvisa, kubvisa bvudzi uye kugadziridza kweganda, izvo zvese zvinoratidzwa kuti zvinoshanda.
IPL ndiyo yega fotoelectric chishandiso chinoburitsa mafungu emwenje akasiyana mawavelengths, ayo anogona kubata nematambudziko akawanda eganda mune kumwe kurapwa. Smedtrum ST-690 IPL system inogona kushandiswa pakurapa acne, maronda maronda, epidermal pigmentation kubvisa, kubvisa bvudzi uye kugadziridza kweganda, izvo zvese zvinoratidzwa kuti zvinoshanda.
ST-990 Multi-basa Workstation
ST-990 Multi-function Workstation inosanganisa IPL uye Bvudzi Removal Diode Laser tekinoroji, iyo inopa akasiyana siyana ekurapwa kweganda pane imwechete kifaa.